Zvinokosha zvinodiwa kumuchato wechechi | Bezzia
Zvinokosha zvinodiwa kumuchato wechechi
Susana godoy | | Muchato
Kana iwe uri kufunga kupemberera a muchato wechechi, unogona kunge uine mibvunzo yakawanda inouya mupfungwa. Asi usazvidya moyo nekuti tiripo kuzozvigadzirisa. Mhando yega yega yemhemberero ine zvimwe zvinodiwa izvo zvinofanirwa kuitwa. Naizvozvo ichokwadi kuti mamwe anogona kusiyana, asi iwe zvakare uchaudzwa nezve izvi zvese.
Kuti tipemberere muchato wechechi, tinofanirwa kuenda kunharaunda yatinoda kupemberera. Nekuti nhanho yekutanga ndeye taura nemupristi uye kubva ipapo zvese zvichauya zvakakungurutswa. Asi hongu, iwe unofanirwa kugara uchizviita pamberi, kuti ugone kugadzirira mapepa ese. Usapotsa zvinotevera!
1 Kugadzwa nemupristi
2 Ndeapi magwaro anodiwa
3 Muchato unopupura nechechi
4 Mushure memuchato
Nhanho yekutanga yatinofanira kutora ndeyekutaura nemupristi. Kune izvi, tinofanirwa kuenda kuchechi yeparishi redu kana chero kwatinoda kupemberera muchato wedu. Chokwadi ikoko vatove kukuudza dzimwe nguva kuti ugone kutaura nemufundisi weparishi. Chinhu chakanakisa kugona kuita musangano, uchiti uri kuzoroora uye kuti iwe unoda kugadzirisa zvese zvese naye. Nekuti ndiye achave anokuudza kuti ndeapi magwaro aunofanira kumuunzira. Ichokwadi ndechekuti mumadhokosi mazhinji zvinodikanwa zvakafanana. Asi zvakadaro, sekutaura kwedu, zviri nani kubvunza mupirisita zvakananga. Pachinhu chidiki, zviri nani kuti utaure naye mwedzi inenge mitanhatu kana misere muchato usati waitwa. Asi kana imwe yemapati ichibva kune imwe nzvimbo, iyo nguva ichave yakareba.
Ndeapi magwaro anodiwa
Photocopy yeiyo DNI yemaviri mapato.
Chitupa chekubhabhatidza. Izvi zvinokumbirwa muchechi mawakabhabhatidzirwa.
Chitupa chekuzvarwa. Kuti uite izvi, unofanirwa kuenda kuRegistry Registry yenzvimbo yako.
Dzimwe nzvimbo dzinodawo chitupa chimwe chete.
Pre-yekuroora kosi. Mamwe maparishi anopa mwenga nemuroori mamwe makosi, ayo anowanzoitwa mukati mevhiki uye iri mhando yehurukuro. Pakupera kwayo, ivo vachazopihwa rudzi rwechitupa.
Kana iwe wakaroora zvakarongeka, saka unofanira kuunza chitupa chinokuzivisa iwe.
Muchato unopupura nechechi
Mushure mekutaura nemupristi kekutanga, unozotanga kugadzirira mapepa ese anodiwa. Mwedzi mishoma mushure memusangano wekutanga uye nemuchato wepedyo, uchafanirwa uyai nezvapupu zviviri uye dzokera kumusangano nemupristi. Mune ino kesi, zvinogara zviri nani kuunza vashoma shamwari uye pasina nhengo dzemhuri. Iwo musangano uko mupristi anowanzo bvunza kuti iwe wakazivana kwenguva yakareba sei uye ivo vanotaura nezve hushamwari uye ramangwana mubatanidzwa. Sezvatinogara tichitaura, zvese zvinoenderana nemupristi ari mubvunzo, asi haisi hurukuro inotora nguva yakareba.
Mushure me mhemberero yemuchato, tichasaina mapepa. Haisi nguva dzose chinhu chekufananidzira kuisa iyo pikicha, asi isu tichava chaizvo tichinyoresa muchato. Kunyangwe kuzviita zviri pamutemo zvachose, isu tichava nenguva yemazuva masere kuti tikwanise kuburitsa mapepa akasainwa mu Civil Registry. Nekudaro kunyorwa iro zuva guru uye mubatanidzwa mukuru iwoyo.
Sezvo isu tichiona muchato wechechi zvinoita kunge wakaomesesa, kana uchigadzira iyo mapepa, kupfuura zvazviri chaizvo. Nekuti kana uchinge wataura nemupristi, anozotsanangura zvakakwana matanho aunofanirwa kutora. Mapepa anowanzo shandiswa nekukurumidza, saka haufanire kupeta kakawanda. Iye mupirisita ndiye achave mumiriri wepamusoro uye aine simba, mune iyi nyaya. Nekudaro iwe unofanirwa kuve nezvose zvinodiwa kuti uenderere kumuchato pachawo. Uri kuronga kuroora muchechi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » Muchato » Zvinokosha zvinodiwa kumuchato wechechi
Nzira yekudya zvine hutano pahofisi
Surimi saladhi ine cucumber uye chibage